Sidee buu u shaqeynayaa? - Wargeyska Telefishinka
HomeGUUDSidee buu u shaqeynayaa?
07 / 02 / 2013 GUUD, TELPHER
Sida uu u shaqeynayo
Gawaarida ayaa ah magaca guud ee la siiyay baabuur la joojiyay oo u dhexeysa laba meelood oo meel fog ku yaal hal ama kabadan halaad oo ku xiran hawada. Ropeways waxay ku shaqeeyaan mabda'a wiishka, laakiin waxay ka fuuli karaan dhulka si aad u sarreeya, sida helikobtar, gaar ahaan meelaha dooxooyinka.
Gawaarida waxaa lagu dhisay meel u dhexeysa dhererka adag. Waxa kale oo jira kuwa laga heli karo badda ama cunaha. Kalluumeysatadu waxay ku yaalliin meelo aad u adag ama aad u qaali ah si ay u maraan jidka, tareenka iyo badda. Gobolladaas oo kale, gawaarida lagu rakibay laba qodob oo gaar ah ayaa loo adeegsadaa siinta dadka ama qalabka. Gawaarida ay dadku ku socdaan waxay ka kooban yihiin kabaha rakaabka ee ku dul xidhan biraha birta.
Nidaamyada wadooyinka, kuwaas oo guud ahaan hal dhinac iyo wareegga wareegga halista, ayaa sidoo kale loogu talagalay laba xargo oo birta ah. Halkan, hal xargo oo xadhig ah iyo xarigga kale (s) waxay u adeegaan sida xadhig.
Nidaamka xididka ayaa ka soocaya midba midka kale iyada oo loo marayo qalooca (Grip) taas oo ah qalabka xadhigida xarigga.
Babylift (bilawga sare)
Xaddiga ugu badan ee xNUMX m / sn
Sanduuqa (oo leh kuraasta 2 / 4 / 6) Xawaaraha ugu sareeya ee xiga 3,0 labaad / sec
Kursiga Gawaarida ee Gawaarida ah Kursiga Qaadista La Qaadsiin Karo Xaddiga Ugu Hoose 5 m / sec
Gondola la sifeyn karo oo leh xawaaraha ugu sareeya ee 6 m / sn
Gondolas Group (Dhaqdhaqaaqa Rakaabka ah ee Casriga ah) Xawaaraha ugu sareeya 7 m / s waxaa badanaa la dhigaa fogaanta gaaban, sidaa daraadeed xawaaraha qadka waxaa loo dhigayaa 3,0 m / s.
Noocyada Gawaarida ee Var-Gel (Gacmaha lagu celin karo) Nidaamkani guud ahaan waxaa loo isticmaalaa xaaladaha dhulka iyo dooxooyinka ballaaran ee meelaha tooska ah ay adag tahay. Xawaaraha xawaaraha ugu sareeya waa 12,0 m / sec.
Nidaamka isku dhafan Nidaamka nidaamyadani waa clamp automatic ah. Qaab dhismeedka guud waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo kuraasta iyo gondola.
Nidaamyada kala duwan ayaa ah badiyaa noocyada kala duwan ee Var-Gel. Nidaamka, oo la shaqeeya naas iyo dhowr xargo, waxa loo isticmaalaa nidaamka gondola ee meelaha ku yaalla meelaha dabaysha badan.
Miinooyinka qaarkood ayaa sidoo kale isticmaala nidaamyada wadooyinka gaadiidka.
Waddanka ugu dheer ee waweyn ee caalamiga ah, Norsjö Cable Car, wuxuu ka shaqeeyaa degsiimooyinka Örträsk iyo Mensträsk ee Norsjö, Iswiidhan, dhererka xariiqdan, oo lagu aasaasay 1942, waa 13,2 km. Waqtiga safarka waa saacadaha 1,5 .
Turkey ayaa ugu dheer wiish gondola cable gaariga si Uludag, iyadoo degmada Teferrüç in bursa'dadır.yıldırım 'waxaa la aasaasay dhexeeya xnumx't ku Sarıalanyayla in Uludag. Iyada oo wareejinta garoonka Kadiyila, dhererka guud waa mitirka 1963. Socdaalku wuxuu ka bilaabmayaa meel sarreeya oo ah 4766 m wuxuuna ku dhufanayaa meel sare 374 kadib qiyaas ahaan. baabuur cable Tani waxay sidoo kale waa baabuur cable ugu horeysay Turkey ee [
Sidee Tram Noogalgic u shaqeeyaa
Xulashada horudhaca ah ee seddexda dabaq ee Mashruuca Tunnel Istanbul Et
Ka dib markii taraamka, baabuur guri oo ku yaal Bursaraya
Shaqada Batament Çamlıca ayaa dib loo bilaabay | Eskisehir